Nkqu nabafana abakhulu bayakulibala ukusebenziseka! | Martech Zone
NgoLwesibini, Aprili 17, 2007 Douglas Karr
Ndifuna ukubhala inqaku elifutshane kwimicimbi ethile enokusikhathaza endiye ndayiqaphela ngezicelo ezimbalwa.
Ngoku ka Wikipedia, ekusebenzisaneni kweekhompyuter kunye nakwisayensi yekhompyuter, ukusebenziseka kuhlala kubhekisa kubuhle kunye nokucaca kokunxibelelana nenkqubo yekhompyuter okanye iwebhusayithi.
Eyokuqala endiya kuthi ndiyinike yona ngumcimbi wokuSebenziseka nge Iphepha lasekhaya likaGoogle. Ukuba ukongeza icandelo lokuFunda kuGoogle kwiphepha lasekhaya likaGoogle, lisebenza kakuhle. Nantsi lapho; Nangona kunjalo, umbandela omnye oqaqambileyo: ikhonkco elithi 'phawula konke kufundwe' libekwe ngqo ngezantsi kwekhonkco ukuvula Google Reader.
Amaxesha ambalwa ngoku, ndicofe ikhonkco elingalunganga kwaye konke ukondla kwam ngokuzenzekelayo kuye kwinqanaba lokuba kufundwe. Oku kusebenza ngokulusizi. Ndingakhuthaza uGoogle ukuba asuse eli khonkco FAR kude nakwezinye amakhonkco.
Umzekelo wesibini ngu IMicrosoft Entourage, apho Cima iqhosha le-imeyile ngokuthe ngqo kwiqhosha le-imeyile ye-Junk. I-Microsoft Entourage ifana ne-Outlook ye-OSX, kodwa ayinayo nayiphi na inketho yokuhambisa amaqhosha ngeenxa zonke. Ngenxa yoko, ndongeze ngengozi ii-imeyile ezifanelekileyo kwifolda yam yeJunk Email. Ukulungisa loo nto, kuya kufuneka ndirhoxise nawuphi na umthetho we-imeyile ye-Junk, fumana i-imeyile kwifolda ye-imeyile ye-Junk, emva koko uyibuyisele kwi-inbhoks yam. Kulungile!
Ndingomnye wabafana abathanda ukuququzelela kunye nokuhlela yonke into ngaphakathi kwesicelo. Ndiyakholelwa ukuba yomibini le yimizekelo apho izinto eziququzelelweyo zinengqiqo - kodwa hayi ngokwenkqubo. Kubalulekile ukuqonda ukuba abasebenzisi basisebenzisa njani isicelo sakho ukuze uyeke iimpazamo ezingalindelekanga kulungelelwaniso lwecandelo elibi.
Thelekisa oku kwiWindowsPress, owenza umsebenzi omnandi wokwahlula izinto ezingadibaniyo. Qaphela i Gcina kwaye uqhubeke ngokuHlela kwaye Gcina Amaqhosha aphezulu (asisiseko sefom yeposi) kunye Cima lePosi iqhosha ngasezantsi kwicala lasekhohlo… kude, kude kakhulu komnye nomnye.
Umsebenzi omhle kakhulu, WordPress!
Ngaba unemizekelo yemicimbi eyoyikekayo yokuSebenzisa ngezicelo ozisebenzisayo?
Akukho Mboniso ungcono wokuzalwa! Abafundi bokuFunda abangama-500!
Epreli 18, 2007 ngo-12: 37 AM
inyani encinci eyaziwayo: Ndisisizathu sokuba iqhosha lokucima lijike libebomvu.
kuba andazi ukuba ndiwufunda njani umahluko phakathi kokucima nokugcina 🙁
Epreli 18, 2007 ngo-3: 14 PM
Okanye grey emnyama kwabo bantu colorblind. 😉
Epreli 18, 2007 ngo-9: 52 AM
Ngokwenyani, ukuba usebenzisa i-WordPress 'inkonzo yokubamba simahla kunye ne-IE7 kwaye uzama ukwandisa icandelo elithi "Optional Excerpt", alikhuli ngokupheleleyo. Oku kunokuba yi-glitch ngaphezulu kwengxaki yokusetyenziswa, kodwa ungaze ube ngaphantsi, inokucaphukisa.
Epreli 18, 2007 ngo-10: 57 AM
Nantoni na kwi-myspace.
Wes, lo wandenza isikhohlela ndahleka kakhulu. Unyanisile ngokupheleleyo!